व्यूटिफुल अफ बहराइनको टप १० मा पुगिन नेपाली चेली इन्दिरा
पर्वत हुवास ३ की इन्दिरा क्षेत्री बहराइनको चर्चित पत्रिका बहराइन कन्फिडेन्सियलले आयोजना गरेको व्यूटिफूल वुमन अफ बहराइन प्रतिस्पर्धामा हजारौं प्रतिस्पर्धीलाई ...
विराट कोहलीको कपडा चोरी
भारतका स्टार क्रिकेटर विराट कोहलीको ब्रान्डेड लुगा चोरी भएको छ। उनले सामाजिक स‌ंजालमा आफैले यसको जानकारी दि...
बलिउड नायक आमिर खानले आफू नयाँ चलचित्रमा अमिताभ बच्चनसँग काम गर्न लागेको घोषणा गरेका छन् । ‘थ्री इडियट, पीके’ जस्ता सफल एवं करोडौ कमाइ गर्न सफल चलचित्र बनाएका आमिरले ट्वीट गर्दै बच्चनसँग काम गर्न लागेको घोषणा गरेका हुन् । उनले लेखेका छन्-‘आखिर यो घडी आईपुग्यो, जुन कुरा मैले प्रतिक्ष...
नेपालमा सुटिङ गरिएको ‘एभरेस्ट’बाट भेनिस फेस्टिबल सुरु
मीन भामकाे 'कालो पोथी' पनि देखाइँदै
विश्वप्रसिद्ध भेनिस फिल्म फेस्टिवलको ७२ अाैं संस्करण नेपालमा सुटिङ गरिएको फिल्म ‘एभरेस्ट’ देखाएर सुरु गरिएको समाचार एजेन्सी एपीले जनाएको छ । सन् ...
नविन के भट्टराइले नयाँ गीत, नयाँ भिडियो
नेपाली पप गायन क्षेत्रका चर्चित गायक नविन के भट्टराइले नयाँ गीतको भिडियो बजारमा ल्याएका छन् । नविन के भन्ने वित्तिकै नेपाली पप गीतका श्रोताहरुलाई छुट्टै आशा र उत्साह देखिन्छ । नविनले यो कुरालाई मर्न दिएका पनि ...
बलिउडमा सबैभन्दा महंगो पारिश्रमिक लिन्छिन् कंगनाले
मुम्बई । बलिउड क्वीन भनिने कंगना रनौतले महंगो पारिश्रमिक आफ्नो हक भएको बताएकी छिन् । उनको भनाई अनुसार हरेक कलाकारले जिवनको एउटा अध्याय पार गरेपछि मंहगो पारिश्रमिक लिनैपर्छ । तर, यसले निरन्तरता �...
सलमान खान भन्दा अरु कुनै केटाहरु सेक्सी लाग्दैन्
सालु गौतम, मोडल (अन्तर्वार्ता)
कसरी चल्दैछन् दिनहरु ? भर्खर तीज गीतको भिडियो सुट सकियो । स्टेज प्रोग्राम पनि परिरहेको छ । अहिले ‘तिम्रो मेरो जोडी साह्रै जम्छ रे’ गीतको भिडियो सुरु गरेकी छु । स्टेज कत्तिको तताइरहनु भएको छ ? मजाले तातेको छ जस्तो लाग्छ । �...
आलोचित `मुखौटा`का सौगातको प्रशंसा | अर्पणको फेसबुक डिएक्टिभ
फिल्मको व्यापार, प्रस्तुती र प्रतिक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ । प्रदर्शनरत फिल्म ‘मुखौटा’ बाट अभिनेता सौगात मल्लले भने थप चर्चा तथा प्रशंसा पाउन सफल भएका छन् ।...
मौसम बिहेको छ । ५० वर्षमा अभिनेता राजेश हमालले बिहे गरे । पचासकै उमेर समुहमा पर्ने अभिनेत्री फिल्म मिथिला शर्मा बिहेको तयारीमा छिन् ।...